» “बुद्धि बिग्रिए, प्रचण्ड–माधव, हुन्छन्:-माधव नेपाल् माफी मागेर आए पनि एमालेमा नो इन्ट्री :- ओली” “बुद्धि बिग्रिए, प्रचण्ड–माधव, हुन्छन्:-माधव नेपाल् माफी मागेर आए पनि एमालेमा नो इन्ट्री :- ओली” – हाम्रो खबर
“नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता बिग्रिए माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले छोडेका माधव नेपालजस्तो हुने टिप्पणी गरेका छन् । उनले नेपाल र प्रचण्ड दुवै दक्षिणपन्थी कित्तामा पुगेको भन्दै उनीहरु वामपन्थी हुनै नसक्ने दावी गरे ।”
“बुधबार एमाले वागमती प्रदेश कमिटीको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वामपन्थीको सरकार ढलाएर दक्षिण पन्थीको सरकार बनाउने कम्युनिस्ट हुनै नसक्ने दावी गरे । उनले एमालेले गलत प्रवृत्तिविरुद्ध लडिरहेको र आगामी दिनमा पनि लड्ने भन्दै त्यसको विजयका लागि पार्टीलाई एकतावद्ध राख्नुपर्ने बताए ।”
“पार्टीभित्र गलत प्रवृति झाँगिएका छन् । गलत प्रवृत्तिविरुद्ध जुध्नुपर्छ । पार्टीमा एक स्वर हुनुपर्छ । एकजुट हुनुपर्छ । कमिटीमा एउटा निर्णय गर्यो भने मैले त यसो भनेको छु भन्नु व्यक्तिवादी हुन्छ । कमिटीका निर्णय एकसाथ र एक स्वरले यस्तो निर्णय गरेको छ भन्नुपर्छ’, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘पार्टीभित्र मतभेद बढाउने क्रियाकलाप गर्नुहुँदैन । हाम्रो तौरतरिका मिलनसार हुनुपर्छ ।”
“उनले माधव नेपालको जस्तो चरित्र एमालेमा हुन नहुने बताए । ‘माधव नेपालको जस्तो चरित्र हामीले देखाउने हो ? विरोधीका पाउ मोल्ने, म्याउम्याउ गर्ने ?’, ओलीको प्रश्न छ । उनले पार्टीको ध्येय विजयी र सफलता प्राप्ति भएको भन्दै हिजो पार्टीमा अन्तर्घाती, अराजक प्रवृति माधव नेपालहरुले भित्र्याएको बताए ।”
“माधव नेपाल हेर्नुस् न त आफ्नो सरकार ढाल्न, अनि वामपन्थी सरकार ढालेर दक्षिणपन्थीको पाउमा ? यस्ता पनि वामपन्थी हौं भन्छन् ? दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरोधमा लड्ने रे ?’, ओलीले माधव नेपालप्रति व्यङ्ग्य गरे । उनले एमालेको बाढी कसैले छेक्न नसक्ने भन्दै अहिले आफुहरुलाई कोही कसैले मिल्दा र मिलाउँदा आपत्ति नभएको पनि बताए । वामपन्थी एकताको प्रसंग निकाल्दै ओलीले भने, ‘तर मिलाउन लायक कोही छैन । वामपन्थी सरकार ढाल्नेसँग मिल्ने ? ’
“उनले हिजो र आजका प्रचण्ड हेर्न कार्यकर्ताहरूलाई सुझाव पनि दिए । उनले अहिलेको सरकार आलोचना गर्न लायक समेत नभएको टिप्पणी गरे । ‘हेर्नुस त हिजोको यत्रो दलको प्रचण्ड, टुटु टु गर्छन् हालत यस्तो छ । आन्दोलनप्रति, विचारको निष्ठा भएन भने यस्तो हुन्छ’, ओलीको भनाइ छ ।”
“ओलीले पार्टीमा १० बुँदे कार्यान्वयन नभएको भन्ने नेताहरुलाई पनि जवाफ दिए । ‘के को दश बुँदे ? हामीले अझैपनि माधव नेपालसँग झुक्किएर गएकालाई आउ भनिरहेका छौ । तर, माधव नेपाललाई नो इन्ट्री ।’ उनले नेकपा एमालेमा माधव नेपाललाई प्रवेश नदिने पटक–पटक दोहोर्याए ।”
‘के नेकपा एमाले डम्पिङ साइड हो ? यो पार्टी त पवित्र हो’, नेता नेपाललाई उनले कुहेको आलुको संज्ञा पनि दिए । ‘उनले सोचेका होलान् वामदेवले ५४ मा फुटाएर पनि ५८ मा लिएका थियौ । माधवले जस्तो अपराध वामदेवले गरेका थिएनन्’, ओलीको भनाइ छ”